I-2-Handle Bridge Bridge Faucet enecala lokutshiza
Ikhaya / IFaucets yasekhitshini / Imbiza yokuGcwalisa iiMpompo zeKhitshi / WOWOW 2-Handle Ibhulorho Yekhompiyutha Yekhitshi Ngecala lokutshiza
Wowow 2-Handle Bridge Bekhitshi Faucet eneSide Sprayer
Isikhenkcisi sekhitshi sobhedu esine-sprayer esecaleni senziwe ngebronze eqinileyo yokuqinisekisa umgangatho kunye nokuqina. Ukugqitywa komgangatho ophezulu kuqinisekisa ukuba ifenitshala yakho yasekhitshini inako ukumelana nokuhombisa okanye ukuvela. Ngokuqinisekileyo loo nto iya kuba yinkunkuma xa ukhetha i-faucet ekhitshini engazukubanemigangatho efanayo. I-Wowow igqithe ngaphaya kwayo yonke imigangatho yemizi-mveliso kunye nokuphuma kwayo phantse kuyo nayiphi na uphawu lophawu lwe-A.
Ukurwebela ixabiso lemali esikunika yona, I-WOWOW ayoyiki ukukunika iminyaka yesiqinisekiso seminyaka emi-5. Uninzi lwabathengisi, kunye ne-A-brand, banikezela nje iwaranti yonyaka omnye. Ukuba isitofu sakho ekhitshini sinokuhla ngonyaka wesibini, iya kuba ngumngcipheko wakho. Kwaye kuya kufuneka uthenge kwakhona itikiti elitsha ekhitshini. Ku-WOWOW asikufumani oku kufanelekileyo, njengoko itafile ekhitshi esemgangathweni kufuneka ihlale iminyaka emi-1. Kungenxa yoko le nto iWOWOW ikunika eli xesha lingagunyaziswanga lewaranti yeli ngaphantsi kweminyaka emi-5. I-Wowow kukuba iqinisekile ngephedi ekhitshini yasekhitshini, ukuba ikubonelela ngenkonzo yokubuya kweentsuku ezingama-5. Uyibuyisa imali yakho, imbuyiselo epheleleyo, xa ungafane uchukunyiswe lixabiso lemali oyifumana ngephephethi yekofu ye-WOWOW. Esi siqinisekiso sokubuyiswa kwemali singqina ukuthembela kwethu kwifenitshala yasekhitshini! Izibonelelo zomsebenzi wokuphelisa ikhitshi ekhompyutheni ngendlela engezantsi:
I-SKU: 23115A1 iindidi: IFaucets yasekhitshini, Imbiza yokuGcwalisa iiMpompo zeKhitshi tags: 8 intshi, iblorho, ukuvunwa kweediliya